Yakadzika Groove Bhora mabheyaringi - Shandong QILU Maindasitiri & Kutengesa Co, Ltd.
Kunze kwekugadzira zvigadzirwa, Qilu inosarudzikawo mukugadzira uye kugadzira zvakasiyana-siyana, yepamusoro mhando yakadzika groove bhora mabheyaringi e60 akateedzana uye makumi matanhatu neshanu akateedzana nemabhora saizi e3.969 mm uye 4.763 mm, ayo anoshandiswa zvakanyanya mune yemachira, magetsi emagetsi, mota, midziyo yemumba, maturusi emagetsi, mapampu, midhudhudhu, mota dzinorema, matoyi evana nezvimwe.
Kubva pamhete, keji, bhora resimbi kusvika kumafuta, Qilu anosarudza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro padanho rega kuti ave nechokwadi chekuti vatengi vanogona kuchishandisa vakasununguka.
Qilu inobata mhete uye bhora iri vhuvhu degassing yakakwira hutsanana yakakwira kabhoni chromium inotakura simbi GCr15, ine yakazara yakaoma kuomesa kurapwa nekupisa kurapwa choto, izvi zvinoita kuti kudzimisa kuomarara, inochengetedza kwayo kwakanyanya mutoro kuramba, kusimba uye ruzha hunhu.
Chemical Kugadzirwa kweGCr15 zvinhu:
Iyo keji yakakodzera inogadzirwa nechando chakakungurudzwa chakadzika kabhoni simbi sheet.
Isu tinoshandisa inotonhorera-yakaderedzwa electrolytic tinplate kune iyo yakavhundutswa, inova isiri-chepfu ine hunhu hwakanaka mukutsika kugadzirisa uye kurwisa-ngura, Iyo nhovo inoita basa rakanaka mukudzivirira kweguruva, girisi rinodonhedza-chiratidzo uye dziviriro yehunyoro nezvimwe.
Rubha chisimbiso zvinhu
Chisimbiso zvinhu is nitrile rabha, inova iyo copolymer yeacrylonitrile-butadiene.Iyo inonyanya kushandiswa kuiswa chisimbiso zvinhu sekushanda kwayo kwakanyanya mukushomeka kwemafuta, elasticity, abrasion kuramba, michina simba nezvimwe.